Masangano eMagweta Anoshoropodza Kusungwa kweMagweta
Magweta achiratidzira gore rapera achinyunyuta nekwaanoti kusaremekedzwa kwemutemo nehurumende.
Magweta maviri, VaTapiwa Makanza pamwe naVaJoshua Chirambwe, avo vakasungwa mukupera kwesvondo, vamiswa pamberi pedare ramejasitireti nhasi vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 184 chemutemo weCriminal Law Codification Act.
Gweta riri kumirira vaviri ava, VaPaidamoyo Saurombe veZimbabwe lawyers for Human Rights, vanoti VaMakanza naVaChirambwe vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika, kuzviratidza mukapurisa kamwe pasvondo, uye kusarenda magwaro avo ekufambisa kudare.
Vaviri ava vanonzi vanziwo vagare pakero dzavakanyoresa kudare, uye vasakanganisa vafakazi.
Mhosva iyi inonzi yakaparwa mushure mekunge magweta aya asvitsa kumatare zita rinonzi nevachuchisi nderekunyepa raVaSimbarashe Zuze, avo vakapikisa gore rapera kudomwa kwaVaKumbirai Hodzi semuchuchisi mukuru wenyika, vachiti vakanga vasingakodzeri kuwaniswa basa iri sezvo vakanga vasina kubuda zvakanaka mubvunzo dzavo.
Rimwe gweta VaThabani Mpofu, vakasungwawo svondo rapera vachipomerwa mhosva imwecheteyo, uye vakabvisiswawo mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo.
VaSaurombe vanoti mamwe magweta maviri akambenge achipomerwa mhosva imwecheteyo, VaLawman Chimuriwo naAmai Choice Damiso, vazonzi vave vafakazi munyaya iyi.
Asi vanoti kuita uku kuri kukanganisa magweta kuita basa ravo vakasununguka.
Kusungwa kwemagweta aya kunouyawo munguva iyo rimwe gweta, VaDumisani Dube, vakasungwawo kuBulawayo svondo rapera vachipomerwawo mhosva yekutyora chikamu 184 chemutemo weCriminal Codification Act, vachinzi vakafoja magwaro munyaya yavaishanda segweta.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu rakashoropodza zvikuru kusungwa kwemagweta uku, richiti kunombunyikidza mashandiro avo, richiti mapurisa ari kusunga vanhu kuti aferefete, kwete kuferefeta kuti agozosunga.
Sangano iri rakati kana hurumende iine nyunyuto pamusoro pemashandiro emagweta inofanirwa kumhan’ara kusangano reLaw Society of Zimbabwe.
Rimwe sangano remagweta evechidiki, reYoung Lawyers Association of Zimbabwe raburitsawo gwaro richishoropodza kwarinotiwo kuparara kwemutemo nekushungurudzwa kwemagweta mukuita basa ravo.